” Birds of Prey ” ဇာတ်ကားမှာ Harley Quinn အဖြစ် ပြန်မြင်ရတော့မယ့် Margot Robbie – SoShwe
Home/Uncategorized/” Birds of Prey ” ဇာတ်ကားမှာ Harley Quinn အဖြစ် ပြန်မြင်ရတော့မယ့် Margot Robbie
admin February 1, 2019	Uncategorized Leaveacomment
၂၀၁၆ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ Suicide Squadဇာတ်ကားထဲက Anti-Heroes တွေရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေက စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ အမြဲတမ်းထွက်ပြေးနေတတ်တဲ့ Joker ရဲ့အနောက်ကို Harley Quinn က လိုက်နေဦးမှာပဲလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း မေးလာကြပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ Harley Quinnကို ” Birds of Prey ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ သူ့ရဲ့တွဲဘက် Joker မပါဘဲ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ Tarantino ရိုက်ကူးထားတဲ့ ၂၀၁၉ ဂျူလိုင်လမှာ ထွက်ရှိလာမယ့် ” Once Upon A Time In Hollywood ” ဇာတ်ကားထဲမှာ Robbie က Brad Pitt နဲ့အတူတူ သရုပ်ဆောင်ထားတာကို ပရိသတ်တွေက သိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Robbie ကတော့ သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်ကနေ ” Birds of Prey ” ဇာတ်ကားထဲမှာ Harley Quinn အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြောင်း ပရိသတ်ကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Cathy Yan ကတော့ ” Birds of Prey ” ဇာတ်ကားမှာ Black Canary နဲ့ Huntress ဇာတ်ကောင်အတွက် သရုပ်ဆောင်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တာမို့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှ ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Robbie က ” ဒီဇာတ်ကားထဲက Harleyကတော့ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ပေါ့။” လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးပြောပြခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့အပေါင်းအပါအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ခပ်ကြမ်ကြမ်းလေးသရုပ်ဆောင်မှာမို့ အတော်လေးကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမှာပါပဲ။ ” Suicide Squad ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက ပရိသတ်ထောက်ခံမှု အပြည့်အဝမရပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေက Harley Quinn နဲ့ပတ်သက်ပြီး မျှော်မှန်းချက်ကြီးပုံပဲ။ Suicide Squad ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ Harley ဟာ Arkham စိတ္တဇဆေးရုံက စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ Joker ကိုသဘောကျမိပြီး နောက်ပိုင်း သူ့ကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်အောင် ကူညီပေးခဲ့တာပါပဲ။ အဲ့နောက်မှာတော့ တည်ငြိမ်တဲ့ဆရာဝန်မလေး အဖြစ်ကနေ ညို့အားပြင်းတဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းကောင်မလေး တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous Lady Gaga ရဲ့ Las Vegas မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Bradley Cooper
Next ?????? ?????????????? ????????????????????? ????????????????????? ? ? ?
နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသည့် Avengers Endgame ဇာတ်ကားရဲ့ အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ် ကြယ်ပွင့် Chris Hemsworth တစ်ယောက် ပြီးခဲ့သည့် တနလာင်္နေ့က သူ့ကလေးများရဲ့ ကျောင်း၌ …